Anisany olona niangavian’ity renim-pianakaviana ity hanampy azy ity solombavambahoaka ity. Nanana vola 2 tapitrisa ariary ilay renim-pianakaviana ka nitady vola fanampiny hoentiny hitsabo tena any Antananarivo. Araka ny fanampim-panazavana hatrany nilaza fa vonona hanampy an’ilay renim-pianakaviana ity solombavambahoaka ity. « Nasainy nalefa taminy ilay vola 2 tapitrisa ariary ka izy no hameno ny banga rehefa tonga any Antananarivo ilay renim-pianakaviana marary », hoy ny fianakavian’ilay renim-pianakaviana marary. Akory anefa ny hagagan’ity renim-pianakaviana ity rehefa tonga tany Antananarivo.
« Tsy hita ary tsy mandray antso ity depiote ity. Raha tsy mpandraharaha iray avy any Sambava no nanampy an’ity renim-pianakaviana ity ka nanome ity farany vola 500 000 ariary dia tsy tafaverina tany Sambava », hoy ilay fianakaviana. Tsara ny manamarika fa tsy vitsy ireo olona mitaraina amin’ny fihetsika ratsy ataon’ity solombavambahoka izay mialokaloka ambadiky ny antoko Hvm. Lasa Hvm hiringiriny indray mantsy ilay ranamana na dia lany tamin’ny lokon’ny fikambanana mahaleo tena iray tao Sambava aza.
Pounie sy A.Lepêcheur